Intengiso.txt kunye neeAds.cert zikuthintela njani ukurhwaphiliza? | Martech Zone
Intengiso.txt kunye neeAds.cert zikuthintela njani ukurhwaphiliza?
NgoMgqibelo, Matshi 24, 2018 NgoMgqibelo, Matshi 24, 2018 Douglas Karr
Kwimveliso yezigidigidi ezingama-25, i-6 yezigidigidi zorhwaphilizo ayibalulekanga… isisongelo ngqo kumzi mveliso. Ezo zibalo zivela kuvavanyo olwenziwe yi Umbutho wabathengisi beLizwe, owasebenzisana nenkampani yokhuseleko yedijithali I-WhiteOps. Ukhetho oluzenzekelayo olusebenzisa amaqonga entengiso enkqubo aluncedanga. Ukuba unokwenza inkqubo yokujolisa kwii-algorithms, unokukwazi nokwenza iinkqubo zokutsala intengiso.
Ukuboleka kwamanye amashishini, njenge-imeyile, Iilebhu ze-IAB ziphuhlise iinkcukacha zeNtengiso. Iintengiso.txt zinethemba lokuvimba ubuqhetseba ngokwenza isalathiso sabathengisi abagunyazisiweyo kunye nabapapashi.
Iintengiso.txt zimele Abathengisi abagunyazisiweyo bedijithali kwaye yindlela elula, eguqukayo nekhuselekileyo abanokuthi bayisebenzise abapapashi nabasasazi ukubhengeza esidlangalaleni iinkampani abazigunyazisayo ukuba zithengise uluhlu lwazo lwedijithali. Ngokwenza irekhodi loluntu laBathengisi beDijithali abagunyazisiweyo, i-ads.txt iyakwenza ubala ngakumbi kuludwe lwempahla, kwaye inike abapapashi ulawulo kuluhlu lweempahla zabo kwimarike, zisenza kubenzima kubadlali ababi ukuba bafumane inzuzo ngokuthengisa izinto ezingekhoyo kuyo yonke indalo. Njengoko abapapashi besebenzisa iintengiso.txt, abathengi baya kuba nakho ukubachonga ngokulula abaGunyazisi abagunyazisiweyo bedijithali kumvakalisi othatha inxaxheba, ukuvumela iimveliso ukuba zizithembe ukuba zithenga uluhlu lwempapasho lokwenyani.
Ungayibona eyam iintengiso.txt ifayile, apho ndinazo zombini i-LiveIntent (iqonga lethu lentengiso le-imeyile) kunye neGoogle Adsense (inethiwekhi yethu yentengiso) edwelisiweyo.
Iintengiso.txt yindlela entle yokwenza ukugunyazisa ukubekwa kwentengiso kwindawo yakho. Nangona kunjalo, ayiqinisekisi umthombo wentengiso. IAds.cert okwangoku iphantsi kokwenza oko. Iyafana nendlela esebenza ngayo iteknoloji ye-blockchain, iAds.cert iya kuqinisekisa ukuba ugunyazisa ukubekwa kwentengiso, kunye nokuqinisekisa iQonga leMfuno esecaleni (okanye i-DSP).
Iintengiso.cert, kunye neeAds.txt ziya kuqinisekisa:
Iqabane eligunyazisiweyo ukuthengisa.
Uluhlu lweentengiso yinyani.
Uluhlu lweentengiso belukhona ingatshintshi.
Kukho ezinye umbuzo malunga nokuba ngaba le nkqubo ayinabuchule inokuqhubekeka izicelo ezininzi kunye nedatha ngexesha lokwenyani njengoko kufuneka. Kuhlala kubonakala.
Nalu ukujonga ngokubanzi kwenkcazo evela I-Smart AdServer, Ukulwa ubuqhetseba neMigangatho: Intengiso.txt kunye neeAds.cert zichaziwe.
tags: ungqinisiso lwentengisougunyaziso lwentengisoubuqhetseba kwintengisoUluhlu lweentengisoiintengiso.certiintengiso.txtIABujames hercherumncedisi okrelekrele
I-REMME: Ngaba iBlockchain iyakususa kwiiLogins kunye neePassword?